Hlanganisa Abakhiqizi bombala nabahlinzeki | China Hlanganisa Umbala Wemboni
Umbala We-Horticulture Lighting Fructus Mix
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-3030 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kweshubhu le-LED nokunye. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambelana nobukhulu obufanayo be-LED emakethe namuhla. Izici ezibalulekile ● I-PPF ephezulu ne-PPF / W yokukhanya okumhlophe ● Kwenzelwe ukukhanyisa okuphezulu kokulima kwezitshalo ● I-Luminou ephezulu ...
Uhlobo lweHorticulture Lighting Mix Colour General
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-3030 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kweshubhu le-LED nokunye. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambelana nobukhulu obufanayo be-LED emakethe namuhla. Izici ezibalulekile ● I-PPF ephezulu ne-PPF / W yokukhanya okumhlophe ● Kwenzelwe ukukhanyisa okuphezulu kokulima kwezitshalo ● Okukhanyayo okuphezulu ...
I-Horticulture Lighting Khulisa izithombo Hlanganisa Umbala
I-Horticulture Lighting Hlanganisa imifino enamahlamvu ombala
Incazelo Yomkhiqizo Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ilambu le-bulb ye-LED, ukukhanya kweshubhu le-LED nokunye. Le ngxenye inokuphrintwa konyawo okuhambelana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. ” Izici ezibalulekile ● I-PPF ephezulu ne-PPF / W yokukhanya okumhlophe ● Kwenzelwe ukukhanyisa okuphezulu kokulima kwezitshalo ● I-L ephezulu ...